Ethiopia “Iftiin Xoriyadeed Iyo Mid Dimuqraadiyadeed Oo Ka Soo Bidhaamaya Itoobiya” – somalilandtoday.com
Ethiopia “Iftiin Xoriyadeed Iyo Mid Dimuqraadiyadeed Oo Ka Soo Bidhaamaya Itoobiya”
Ka dib markii uu burburay Isbahaysigii Warsaw 1991, badi dowladihii Shuuciga ahaana dumeen, waxa dunida ku dhufatay dabayshii Dimuqraadiyada iyo nidaamka asxaabta badan ku dhisan (Multiparty System) si gaar ah waxa isbadalku uga dhacay dalalka Bariga Yurub, Jamhuuriyadaha Midowga Sovietka (Commonwealth of Independent States) iyo guud ahaan qaarada Africa oo Itoobiya ka mid tahay. Hogaamiyayaal badan oo xukunka hayay wakhtigaas iyo kuwo halgan hubaysan ama mid rayid ahba xukunka kula wareegay, waxa ku adkaatay inay dimuqraadiyad dhab ah ka dhaqan galiyaan wadamadaas balse waxay soo ifbaxay habka loo yaqaan Dimuqraadiyad-U-Eke (Semi-democratic system) oo ka dhaqan galay dalal badan sida Ruushka iyo Itoobiya. Nidaamkani waa habkii kali-talisnimada (authoritarian
system) oo la yara casriyeeyay, waxaana astaan u ah in mar marka qaarkood saxaafada xor laga dhigo markii la doonaa la xidhxidho, hogaamiyayaasha xisbiyada macaaridka oo la cabudhiyo ama xabsiyada lagu guro marka ay doorasho dhacayso.
Itoobiya waxa saameeyay isbadalada caalamka ka dhacay 1991kii. Jabhadii EPRDF oo uu hogaaminayo Meles Zenawi ayaa halgan hubaysan xukun Itoobiya kula wareegtay. Meles Zenawi oo ahaa hogaamiye da’yar ayaa Itoobiya ka suurtogaliyay nidaam Fadaraali ah oo ku dhisan hab qawmiyadeed balse ilaa hada aan cago adag ku taagnayn, sidoo kale isbadalo dhinaca dhaqaalaha ayuu ka hirgaliyay walow heerka faqriga uu aad u sareeyo ilaa hada . Zenawi mudadii uu hogaanka hayay wuxuu Itoobiya ku maamulayay nidaamka dimuqraadiyad-u-eke ah oo cadaadis iyo cabudhin ku dhisan. Meles Zenawi xukunkiisii wuxuu ku dhamaaday iyadoo xabsiyada ka buuxaan maxaabiis siyaasadeed iyo dadka u ololeeya xuquuqul insaanka.; iyadoo ay abuurmeen jabhado hubaysan oo hor leh sida Ginboot 7 iyo kacdoon shacab oo bilow ah . Geeridii Zenawi 2012 ka dib, Dr Hailemariam Desalegn oo ah aqoonyahan wayn ayaa hogaan la wareegay. Waxa laga filayay inuu la yimaado isbadal siyaasadeed (political reform) taasi may dhicin balse waxa ku qarxay cadho dadweyne oo marba marka ka danbaysa sii siyaadaysay. Khaladka labaad ee RW Hailemariam uu galay waxay ahayd in markii fulkaanada siyaasadeed ku qaraxday inuu ku dhiiran kari waayay “isbadal” balse uu sii waday cabudhintii ilaa ay galaafatay hogaamintiisii.
RW Abiy Ahmed oo hogaanka Itoobiya la wareegay bishii April 2018, wuxuu u muuqdaa inuu yahay hogaamiye aragti fog leh; waxaad moodaa:
– Inuu fahamsan yahay “isha Cali ka lulata” wixii ku dhacay Raysal wasaarihii ka horeeyay iyo daadkii la tagay.
– Inuu fahamsan yahay in aan cabudhin, awood maroorsi iyo qori caaradii shaqaynin, laguna maamuli karin shacabka Itoobiya.
– Inuu fahamsan yahay in xoriyatul-qowlka, xoriyada shakhsiga (individual liberty), dhawrista xuquuqul insaanka iyo dhisida dhidibada dimuqraadiyadeed tahay dariiiqa saxda ah ee lagu hogaamin karo Itoobiya.
– Inuu fahamsan yahay in nabad waarta iyo deganaansho siyaasadeed ay fure u tahay horumar dhaqaale sidaas darteedna uu bilaabay inuu wadahadal la galo mucaaridka hubaysan.
– Inuu fahamsan yahay in geeska Africa oo noqday hoygii colaadaha, gaajada iyo rafaadka in lagu badali karo iskaashi iyo isdhexgal dhaqaale (Economic integration), sidaas darteed uu bilaabay soo afjarida colaadii Ethiopia iyo Eritrea iyo guud ahaan uu bilaabay xidhiidh cusub oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ka hirgala Geeska Africa.
Dad badan ayaa qaba in RW Ahmed degdegayo balse Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “gees lo’aad kulaylka ayaa lagu goostaa”. Hogaamiyayaasha aragtida-fog lihi waxay go’aamada cul culus qaataan mudada xiisaha wayn loo hayo (momentum). Xiisaha iyo xamaasada dadka Itoobiya u hayaan “ISBEDEL” ayuu Raysal Wasaaruhu uga faa’idaystay inuu ku dhaqaaqo go’aamadiisa masiiriga ah.
Ugu danbayntii, wadanka Itoobiya oo nabad ah, hanaan dimuqraadiyadeed oo dhab ahina ka hirgasho, waxay fure iyo fursad wayn u noqonaysaa in horumar siyaasadeed, dhaqaale iyo istimaaciba helaan shacabwaynaha Itoobiya. Sidoo kale waxa dan wayni ugu jirtaa guud ahaan Geeska Africa gaar ahaan Somaliland iyo Somalia.